स्वास्थ्य Archives - Ukali Orali
अत्यन्तै जरुरी : कोरोना भाइरस (COVID19) को संक्रमणबाट बच्न यसाे गराैं
कोभिड–२०१९ नाम दिएको कोरोनाबाट कसरी बच्ने ? .१. घरबाट बाहिर सार्वजनिक यातायात प्रयोग, भीडभाँडमा जाँदा वा मानिसहरुको समुह भएको कार्यस्थलमा जाँदा लाज नमानी पञ्जा (Glove) तथा फेस मास्क (Face mask) अनिवार्य लगाऔ । २. एक पटक प्रयोग गरिसकेको फेस मास्क वा पञ्जा पुन: दोहर्याएर प्रयोग नगरौ वा दैनिक सफा/परिवर्तन गरौ । ३. घरभित्र कोठा वा… Read More »
कोदोको परिकार खाँदा : क्यान्सर, मधुमेह तथा मुटुसम्बन्धी रोगबाट बचाउँछ
जाडोयाममा कोदोको ढिँडो पहिलो रोजाइमा पर्छ । पहिला पहिला–गाउँघरमा चामल उत्पादन कम हुने भएकाले कोदोको ढिँडो बढी खाने गरिन्थ्यो । तर, अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ । गाउँशहरमा चामलभन्दा ढिँडो लोकप्रिय बन्न थालेको छ । परिवारका सबै सदस्य भेट हुँदा घरमा मीठो परिकार बनाउने भनेर चिसोमा ढिँडो खाने चलन छ । शहरी क्षेत्रका ठूलाठूला… Read More »
कोरोनाको लक्षण नै नदेखिएकी एक महिलाद्वारा पाँचजना संक्रमित –
बेइजिङ । कोरोना भाइरसको कुनै पनि लक्षण नदेखिएकी एक महिलाद्वारा पाँच आफन्त संक्रमित बनेका छन् । कोरोनाको इपिसेन्टर वुहानबाट ४०० माइल यात्रा गरेर उत्तरी एन्याङ पुगेकी २० वर्षीय ती चिनियाँ महिलामा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएको थिएन । तर, पनि उनीबाट फैलिएको कोरोनाबाट पाँचजना आफन्त संक्रमित बनेका छन् । कुनै लक्षण नदेखिएर पनि कोरोनाको संक्रमण… Read More »
घ्युकुमारीको जुस पिउदा र लगाउदा फाइदै फाइदा ! जानी राखौ
घ्युकुमारीको करिब २ सय ५० प्रजाति रहेका छन् । यसमध्ये केही प्रजातिमात्र औषधीय गुण हुने गर्छ । यसमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजाती बार्बाडेन्सीस वा एलोभेरा हो । हाम्रो शरिरको सही विकाका लागी २१ वटा एमिनो एसिडको आवश्यकता पर्छ । यसमा १८ वटा एमिनो एसिड एलोभेरामा पाइन्छ । एलोभेरा जुसमा क्याल्सियम, सोडियम, आइरन, पोटासियम, क्रोमियम, मैगनीज, ताम्बा… Read More »
अभिभावकहरुले विकास गरेका विभिन्न प्रकारका संस्कार र बानी स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी छन् । जस्तै : बिहान सबेरै उठ्ने, प्रार्थना गर्ने, बत्ती बाल्ने, भुइँमा सुकुल ओछ्याएर खाने र बारम्बार हात धुने इत्यादि । तर, यी परम्परागत संस्कारलाई अहिले हामीमध्ये कतिले पालना गरेका छौ त ? कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुलाई केही नियम पालना गराउनुपर्छ ताकि… Read More »
आँखाको वरिपरिको कालो धब्बा हटाउने ५ टिप्स
हाम्रो आँखाको वरिपरिको विभिन्न कारणले कालो धब्बा रहेको हुन्छ । यसलाई हटाउन हामी निम्न कुराहरु अपनाउन सक्छौ । काँक्रो – काँक्रोलाई गोलो गरी काट्ने र आँधा वरिपरि १५ मिनेटसम्म राख्नुस र सफा पानीले पखाल्ने । टमाटर – १० मिनेट जति टमाटरको रस र कागतीको रस मिसाई आँखाको वरिपरिको कालो धब्बामा लगाउने र पानीले पखाल्ने ।… Read More »
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ ।कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा हाल्नाले… Read More »
रातो खुर्सानीले रोक्न सक्छ हृद’यघात हुन बाट । कसरी प्रयोग गर्ने ? जान्नुहोस्
एजेन्सी- स–साना दुखाई, चोट र शारीरिक स’मस्याको लागि घरेलु उप’चार गर्न सकिन्छ । र, त्यसका लागि घरभित्रै पाइने विभिन्न खाद्य पदार्थ र अन्य चीजहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, हृद’याघात जस्तो ड’रलाग्दो र ज्या’नमारा रोगको लागि पनि घरेलु उप’चार गर्न सकिन्छ भन्ने कमै मानिसलाई थाहा होला । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले रातो खुर्सानीको सेवनले हृदयाघा’तलाई… Read More »
किशोरावस्थाको संवेदनशिलता र अभिभावकले बुझ्नैपर्ने कुरा
अभिभावकको लागि बच्चा जति ठूलो भएपनि बच्चा नै रहन्छ । तर जब उनीहरुको लालनपालनको कुरा आउँछ, त्यतिबेला बच्चाको विकासका लागि पनि प्रत्येक अभिभावकले उनीहरुसित उमेर अनुसार अलग अलग व्यवहार गर्न जरुरी छ । विकासको कुरा गर्दा हामी जहिलेपनि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवास्था तथा प्रौढ अवस्थाको कुरा गर्छौ । जबकी यी अवस्था बाहेक पनि बाल्यावस्था र टिन… Read More »
स्तन शिशुका लागि दूध बनाउनमात्र होइन, यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ… Read More »